Izivakashi ezivela emhlabeni wonke uye ukhangwa njalo a Australia kude futhi engaqondakali. Melbourne - kuba idolobha lesibili ngobukhulu kuleli zwe, inhloko-dolobha omunye uthi yayo. Kulesi sihloko sizoxoxa edolobheni, izindawo zalo ongasoze walibaleka, izikhumbuzo zemvelo ezihehayo yezakhiwo.
Victoria - kunabo bonke ezweni. Kule ndawo kuba e-UK. Yizwe kokuqhathanisa abatelekile - ulwandlekazi izintaba, amahlathi kanye ezingwadule, amadlelo elikhulu emathafeni mlilo. labantu isimo sika - zahlukahlukene kakhulu. Phakathi "ligolide" ekhulwini XIX lapha Kwafika abafuduki kusukela emakhoneni ezahlukene zomhlaba, igagasi wezifiki kwesibili kwaqala ngemva kuka-1945.
Victoria kuhlanganisa amapaki eziningi kazwelonke, zomlando ugu. Ukuhlukahlukana ezindawo ka kule ndawo abatelekile - ungavakashela ese aluhlaza futhi cool on Errinundra ithafa futhi ubone ezindaweni ezisogwini bemvelo yintombi Croajingolong. Izivakashi ukukhombisa ezintabeni ngokubabazekayo endaweni Alpine futhi ogwadule enyakatho-ntshonalanga Mallee National Park.
Ukukhuluma ngale umbuso wase-Australia, ingasaphathwa onguthelawayeka Omkhulu Ocean Road, okuyinto welula ngasogwini olunothile ulwandle nezwe amabhishi abadumile. Izivakashi belulekwa ukuthi ahambele leya ndawo mlando Goldfields, ngokubabazekayo River Murray.
In the state kukhona amadolobha amakhulu yesifundazwe efana Bendigo futhi Ballarat, nge eziningi izikhumbuzo we "ligolide", futhi amancane omunye-pub amadolobha. Kodwa ukunakekela okukhethekile izivakashi iyinhloko-dolobha ye isimo - ezinhle Melbourne.
Melbourne (e-Australia) itholakala ethekwini Port uPhillip. Kuyinto inhlokodolobha kwamasiko yezwe futhi yaziwa ngezakhiwo ezinhle okukhazimulayo, izitolo eziningi lemikhiqizo abadumile.
Kukhona umlando iminyuziyamu, imibukiso eliyingqayizivele futhi zobuciko, yeshashalazi, izingadi namapaki, njengoba Melbourne (e-Australia) - muzi ezinkulu zesimanje, lapho organically ihlanganisa izakhiwo ezintsha. E Melbourne, kukhona izindawo zokuhlala eziningi ekhumbulekayo ezidinga ukunakwa lezihambi. Namuhla, nabanye babo sizobe ukwethula.
Isikhathi e Melbourne (e-Australia)
Lo muzi libhekisela umkhawuko wesikhathi futhi GMT + 10 GMT + 11 (ehlobo). Isikhathi ngaphambi eMoscow ehlobo amahora ayisithupha, futhi ebusika - eziyisikhombisa.
Kuyinto eziyinkimbinkimbi esikhulu, okubandakanya iminyuziyamu ezintathu - Immigration Museum, Melbourne Museum kanye Science Museum. It yasungulwa ngo-1854 njengoba i-Museum of Geology. Ngo-1870 kwafika Industrial Museum, ke Yaphinde yaqanjwa ngokuthi i-Science Museum of Victoria eyikhulu. Namuhla iqoqo yakhe ihlanganisa cishe abayizigidi ezingu-16 izinto, okuyinto abazinikele umlando kuleli zwekazi, ukuthuthukiswa ubuciko isayensi nobuchwepheshe.
Abaningi izakhiwo yokuqala Australia abadumile. Melbourne ukule umqondo iyathinteka. Umbhoshongo yasekuqaleni "Eureka" iyona Isakhiwo esiphakeme kunazo zonke kuleli dolobha futhi kwesinye sezakhiwo ezweni edume kakhulu. Umbhoshongo kuyinto yesibili kuphela isakhiwo Q1 e Surfers Paradise. 92 storey "Eureka" has a ukuphakama 297 m. Ukwakhiwa isakhiwo saqala ngo-2002. Laqedwa iminyaka emine.
Tower okuthiwa kukhunjulwa okwami "Eureka", lapho phakathi kwekhulu XIX kwakukhona zabhikisha. Lo mlando kubonakala ekuklanyweni isakhiwo - kuyacaca ukuthi umqhele ebonakalayo, efanekisela iminyaka eligadulayo "ligolide", futhi strip ebomvu - uphawu igazi kule mayini. imishwe emhlophe okwesibhakabhaka ingilazi olungaphambili lwesonto - imibala ifulege eyisihlubuki.
Melbourne (e-Australia, izithombe esinikezwe kulesi sihloko) othambekele uyaziqhenya Cathedral omangalisayo St Paul. Kuyinto ibandla elikhulu kunawo wonke-Anglican emzini. Ukwakhiwa senziwa isitayela Gothic, futhi namuhla kulomkhosi Cathedral of uMbhishobhi Omkhulu inhloko-dolobha yezwe, futhi inhloko yabangamashumi archdiocese Anglican.
Anakho indawo enkulu - kunalokho kukhona esikhumbuzo yezakhiwo of Federation Square, futhi ngokuphambeneyo - idolobha sesitimela Station. Lezi zakhiwo ukudala mlando city centre.
Royal Gardens Melbourne esisogwini loMfula Yarra, esondelene kakhulu enkabeni yedolobha. Lapha, endaweni amahektheli 38 lukhula engaphezu kweyishumi ayizinkulungwane zezitshalo. Zimelela hhayi kuphela wendawo, kodwa futhi flora emhlabeni. Melbourne Botanical Gardens, ibhekwa njengomlando wesonto kakhulu ezweni lonke futhi phakathi best in the world.
Ngezinye amakhilomitha 45 kusukela Melbourne Emaphethelweni Kranburn ungavakashela igatsha Royal Gardens, esisogwini indawo 363 amahektha. Lapha ikakhulukazi sikhule izitshalo lwendabuko.
E Melbourne Botanic Gardens Sekuseduze amapaki iqembu "Amakhosi Domaine" Gardens zeNdlovukazi uVictoria no-Alexandra Gardens.
Kusukela yaqala ukuba khona e-Botanic Gardens, umsebenzi uyaqhubeka efundelwa futhi eza ukuhlonza izitshalo. Lapha, isimo National herbarium yadalwa. Namuhla liphethe amakhophi ayizigidi ezingu-1.2 izitshalo omisiwe ezinga. Ngaphezu kwalokho, kukhona iqoqo elikhulu izincwadi, ama-video, iziqondiso ngezihloko Botanical. Muva nje, i-Urban Lemvelo Centre zihlelwe lapha, ubukele izitshalo ezimila izimo kweMvelo ezisemadolobheni.
National Park "Dandenong"
Inani elikhulu of amapaki kanye izingadi kuyinto Australia ezahlukene. Melbourne inikeza izivakashi uhambo National Park "Dandenong". Le ndawo enhle isendaweni yokhalo eqanjwe igama elifanayo, cishe ihora kusuka edolobheni. Lena ethandwa kakhulu iholidi yezakhamuzi zendawo. Yingakho Ngempelasonto edonsela abantu kusukela nasemadolobhaneni azungezile. Ukuganukeja we ipaki - zikagamthilini isihlahla giant lafinyelela ukuphakama ngayikhulu namashumi ayisihlanu amamitha. Kuyinto kwezihlahla ezinde kunazo zonke zezimila eziqhakazayo emhlabeni.
Ososayensi bakholelwa ukuthi kukhona yikhulu kuphela ngemva kweminyaka eyisigidi edlule, kwakunoFakazi ehlathini. Namuhla sibona izinsalela lokhu kuqothulwa lasendulo - isihlahla obukhulu Izinhlobo. Omkhulu umbono lo hlathi, uma ngaye ukuba badlulisele ethandwa umusi esitimela "Puffing Billy" ngaphansi kombhede zikagamthilini giant.
izinkulungwane eziningi zeminyaka kulomhlaba wahlala izizwe bemdzabu vuvurrong futhi bunurong. Kamuva, izwe yaba umthombo ukhuni izinsiza zokuthuthukisa Melbourne. Ekupheleni kuka-XIX leminyaka kwabonakala imigwaqo kuqala futhi nojantshi bezitimela, futhi kusukela ngaleso sikhathi izivakashi wokuqala waqala ukuza lapha. Kusukela 1882 Fern udonga kwathiwa endaweni evikelwe, kodwa waba esiqiwini eyikhulu kamuva (1987)
Enye indawo ezithakazelisayo. National Gallery uyakhazinyuliswa Melbourne (e-Australia). Izikhangibavakashi komuzi Sinesithakazelo esikhulu abacwaningi nososayensi.
Igalari yasungulwa ngo edolobheni ngo-1861. Ngo-2003, izinto zayo zahlukaniswa amaqoqo amabili - International Ubuciko Ian Potter. Okokuqala ibekwe esakhiweni sase-St Kilda, okuyinto yakhelwe by Roy Grounds elakhiwa ngo-1968 enkabeni yedolobha. Futhi Ian Potter Centre sise Federation Square.
Ekuvulweni Gallery Victoria khona koloni esizimele eyishumi kuphela, okuyinto ngenxa "ligolide" baba omunye ezifundeni ezinonileyo zwe. izipho eziyigugu abacebile kanye nokutshalwa enkulu imali baye bavumela-National Gallery ukuthola imisebenzi abaculi lasendulo kanye wesimanje emhlabeni wonke. Kulezi zinsuku, izimali igcinwe ezingaphezu kuka izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha namakhulu amahlanu imisebenzi eliyingqayizivele lobuciko.
Namuhla ungabona imidwebo Palmetstsano, Rembrandt, kukuyo, Rubens, Tintoretto, Uccello, Veronese futhi Tiepolo. Nansi iqoqo omangalisayo zobuciko waseGibhithe, isitsha sezimbali lwesiGreki sakuqala, izinto ezenziwe ngobumba European, nokunye. D.
Ian Potter Centre, lapho kwavulwa ngo-2003, iyona umsebenzi abaculi Australian, kanye lezinto amasiko ukuphila we AboMdabu base-Australia.
Australia (Melbourne) kuyinto Museum emangalisayo, elise isakhiwo Old Treasury. Yakhiwa ngo-1862. Nokho, Ngaphambili, kwaba esingesesibili ngobukhulu e Melbourne emva ePhalamende, uMgcinimafa okwakukulo isikhathi eside - iminyaka eyishumi nesithupha ubudala.
Umbhali nemiklamo yokwakha kuyinto J. Clark abasha abahlakaniphe kakhulu, owaqala ukwakhiwa lapho eseneminyaka engama-nesishiyagalolunye kuphela ubudala. Namuhla lesi sakhiwo senziwa neo-Renaissance isitayela, it is kufanele kubhekwe omunye sezakhiwo ezinhle kakhulu Melbourne.
Igolide Museum zomphakathi lavulwa ngo-1994. Namuhla, kukhona ezinye imibukiso unomphela, okuyinto abazinikele umlando "ligolide", kanye ukubunjwa nokuthuthukiswa kwezinhlangano Melbourne. Ngezinye izikhathi obizwa ngokuthi i-City Museum. Ngokwesibonelo, lo mbukiso "Ukudala Melbourne" wethula izivakashi umlando edolobheni njengoba yasungulwa ngo-1835 futhi iphele ngesikhathi sethu.
Kungokwemvelo ukuthi ingxenye enkulu embukisweni isitshela izikhathi zegolide, ezizenzile anikeza ugqozi ukuthuthukiswa ngokushesha Melbourne futhi walenza nobaluleke kakhulu zaleli zwekazi.
Enye embukisweni ezithakazelisayo - "yayakhiwe igolide" kuzovumela izivakashi ukubona lapho e Victoria wathola ibha lokuqala zegolide, ukuze uqonde ukuthi lokhu okutholakele ishintshile isiphetho ezweni. Ngaphezu kwalokho, Museum elibamba nemibukiso zesikhashana enikelwe emagugu emasiko of Melbourne.
"Tullamarine» Isikhumulo sezindiza
Manje, ake uvakashele Melbourne Isikhumulo sezindiza (e-Australia). "Tullamarine» - lena main zezindiza ihabhu komuzi. Passenger inzuzo, uthatha indawo yesibili e-Australia. Itholakala amakhilomitha amabili amathathu ukusuka edolobheni, ku Emaphethelweni Tullamarine. It lavulwa ngo-1970. Kuyinto kuphela sezindiza elikhonza Melbourne agglomeration. Kusuka lapha ungakwazi fly izindiza ngqo kuwo onke amazwe-Australia kanye Oceania, I-Asia, e-Europe, i-Afrika kanye ne- North America. Ngo-2003, "Tullamarine" sezindiza wathola umklomelo ngamazwe IATA futhi imiklomelo emibili kazwelonke izinga lenkonzo umgibeli. Sezindiza ine zezindiza ezimbili, isimo sezulu esiteshini, ezikhumulweni ezine, lendlu yebhanoyi omkhulu kanye nesigcawu wokubuka.
Esikhumulweni sezindiza "Tullamarine" has ezintathu amahhotela, amathilomu, izindawo zokudla, amagalaji, igumbi ezimbili ezinkulu futhi ukhululekile kakhulu ukulinda, ikamelo zinakho komama kanye nezingane. Okwamuva navigation imishini ifakwe Melbourne Isikhumulo sezindiza (e-Australia). Ukufika (inthanethi), itholakala kwi-website yenkampani inikeza lonke ulwazi olufanele mayelana izindiza.
Eholidini oLwandle Azov. Peresyp: izinto amabhishi
I metro station "Inkanyezi", Petersburg: incazelo endaweni
Gennadiy Petrovich Nilov: Biography, umndeni kanye film career
Izigaxa kusuka umjovo we yini okumele uyenze uma kwakhiwa lwezimpawu?